SomaliaReport: Kenya: Balanqaadday La Dagaalanka Al Shabaab
Ra’iisal wasaaraha dawladda ku meel gaadh ah ee Soomaaliya, mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo kulan la soo qaatay dhiggiisa dalka Kenya, ayaa khamiistii sheegay inay dawladda Kenya ka go’an tahay inay ka taageerto la dagaalanka xoogagga islaamiyiinta. “Waxaan isku af garanay inaan si wada jir ah uga guulaysano kuwa ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka dalka Soomaaliya ee doonaya inay dawladdeena burburiyaan”.. wuxuu intaa raaciyey mudane Farmaajo “ Xoogaggeenu waxay u dagaalamayaan inay xoreeyaan magaalooyinka, dawladad kenyana hadafkeenaas ayey nagu garab taagan tahay”.
Ciidamada soomaaliyeed ee lagu soo tababaray dalka Kenya ayaa dhanka xuduudda dagaal kula jira Al-Shabaab, iyada oo la isla dhex marayo inay ciidamada Kenya ay weerar dhanka xuduudda ah ay gaysteen. warkan ayaanse wali sugnayn. Farmaajo oo diiday in wax su’aal ah laga waydiiyo kulankii isaga iyo Raila Odinga oo socday muddo ah 2 saacadood ayaa sheegay inay isla soo qaadeen qorshaha UN.ta ee ku aaddan Kalfadhiga nabadda ee ka dhacaya Nairobi bishan April 12 ilaa iyo 13-keeda. Shirkan ayaa sababay khilaaf xooggan ka dib markuu Farmaajo sheegay inaysan dawladda ku meel gaadhka ahi ka qayb qaadan doonin.
“Waxaan horay u soo aragnay shirar nabadeedyo badan oo ka dhacay dibadda waddanka, mana aysan keenin isbeddelo iyo natiijooyin” ayuu yidhi ra’iisal wasaaruhu. Wuxuuna intaa daba dhigay “ Ma aha inay shirarku isu keenayaan soomaali oo dhan, Dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan in mustaqbalkoodu uu gacantooda ku jiro”. Maanta galinkii hore ayuu wakiilka khaaska ah ee arimaha soomaaliya u qaabilsan xoghaya UN-ta, Augustine Mahiga sheegay inuu shirku sidii loo qorsheeyey u socon doono iayada oo ay ururada bulshada iyo shacabkuba ay isugu soo baxeen dibadbaxyo laga soo horjeedo meesha lagu qabanayo shirka.
Qaaddicidda shirkan ee dawladda ku meel gaadhka ah ayaa ku soo beegmaya xilli uu xidhiidhkooda UN.ta sii khadhaadhaanayo ka dib markii eedaymo culusi ka yimaaddeen go’aanka muddo kordhinta ee golaha baarlamanka iyo wasiirada, kaas oo ku ekaa bisga Aug. ee foodda inagu soo haysa. Maadaama Mahiga ka hor yimid talaabadan ayey taasi keentay inay dawladda ku meel gadhka ahi u diidday laba sarkaal oo ka socday hay’adda xuquuqda aadamaha inay soo galaan dalka, halka Ra’iisal wasaaraha dawladda ku meel gaadhka ah mudane Farmaajo uu ugu baaqay in xarumaha iyo xafiisyada UN-ta ee Nairobi ku yaal loo soo raro Muqdisho.